Zeziphi iiNjini zokuKhangela eziFundwayo ... | Martech Zone
Iinjini zokukhangela amaphepha esalathiso ane-algorithms ezintsonkothileyo ezinobunzima beetoni ezahlukeneyo, zombini zangaphakathi nangaphandle kwiphepha lakho. Ndicinga ukuba kubalulekile ukuqonda ukuba zeziphi izinto eziphambili eziqwalaselwe ziinjini yokukhangela, nangona kunjalo. Uninzi lwazo zizinto onolawulo olupheleleyo kuzo xa ucwangcisa okanye uyila indawo yakho okanye ubhala nje iphepha lakho. Oku akukhathaleki nokuba yeyiphi na iwebhusayithi yentengiso, ibhlog, okanye nayiphi na enye indawo.
Izinto eziphambili zoKwenziwa kweeNjini zoKhangelo
Phambi kwabafana be-SEO abafunda ibhlog yam bandiqhekeza-ndiza kulahla isibhengezo phaya ngaphandle… le yinxalenye kuphela yezinto ezinokuthi ziqwalaselwe yingcali ye-SEO xa iphonononga kunye nokwenza isiza sakho. Kukho, ewe, ezinye izinto ezinje ngee meta tag, Ukubekwa kwe-HTML, kunye nendawo ukuthandwa. Inqaku lam kukwenza ukuba umakhi wewebhusayithi ophakathi okanye umnini weshishini azi ngezinto ezithile ezinokuguqulwa ngokulula.
The isihloko samaphepha akho iya kuba nefuthe kwindlela elalathiswe ngayo iphepha. Qiniseka ukuba usebenzisa amagama aphambili kwisihloko sephepha lakho kwaye ubeke ibhlog yakho okanye isihloko sendawo yesibini.
akho igama lethambeka Ichaphazela ukubekwa kwakho. Ukuba ufuna ukubekwa phezulu kwamagama aphambili okanye amabinzana, cinga ngokuwafaka kwigama lakho lesizinda.
Thumela ii-slugs zibalulekile kwaye zinokusetyenziselwa ukusebenzisa amagama aphambili kunye namabinzana. Ndizama ukusebenzisa isihloko esisinyanzelo esitsala umfundi kodwa ii-slugs zam zeposi zihlala zilungiswa kwiinjini zokukhangela.
The isihloko esikhulu (h1) yephepha lakho linobunzima ngaphakathi komxholo weenjini zokukhangela. Ukuphakama (est) kokubekwa ngokwasemzimbeni kwi-HTML kuya kuchaphazela nesalathiso.
Njengakumxholo omkhulu, u-a umxholo (h2) iya kuba nefuthe kwisalathiso sephepha.
The isihloko seposi yakho, okanye izihlokwana ezongeziweyo ziya kuba nefuthe kumagama aphambili kunye namabinzana akhonjisiweyo kunye nokuba kuhle kangakanani.
Ukuphindaphinda amagama aphambili kunye namabinzana aphambili ngaphakathi komxholo kubalulekile. La magama aphambili kunye namabinzana aphambili kufuneka ahlalutywe ukubona ukuba ngamagama aphambili kunye namagama aphambili anokukhangelwa.
Amagama aphambili okuncoma kunye namabinzana aphambili aya kunceda.
Lwasekhaya izihlokwana (h3) ikwanceda kwaye inokuba nobunzima ngaphezulu kwamanye amagama kumxholo wephepha.
Sebenzisa amabinzana kunye namagama aphambili ngaphakathi kwe- ithegi yeankile (ikhonkco) ikwayindlela entle yokuqhuba igama elingundoqo kunye nesalathiso samagama aphambili kwiphepha. Sukuchitha le mveliso ibalulekileyo "cofa apha" okanye "ikhonkco"… endaweni yoko, sebenzisa isihloko kunye nesicatshulwa ukuqhuba ubudlelwane phakathi kwekhonkco kunye namabinzana aphambili. Umzekelo, ukuba ndifuna i-domain yam enxulumene nentengiso kunye netekhnoloji, ndifuna ukuqiniseka ukusebenzisa:
Kanye njengekhonkco le-anchor, ukubandakanya iithegi zetayitile kumakhonkco emifanekiso kuluncedo ngokunjalo. Kuba iinjinjini zokukhangela azinakukhangela imixholo yomfanekiso (okwangoku), ukongeza igama elingumxholo wegama elingumncedisi kuya kunceda ngakumbi- ngakumbi ukuba umntu usebenzisa nje Uphendlo Lomfanekiso kaGoogle.
Amagama omfanekiso zibalulekile. Qiniseka ukuba usebenzisa amadeshi kwaye ungagxininisi phakathi kwamagama asemfanekisweni. Kwaye qiniseka ukuba igama lomfanekiso lihambelana nomfanekiso… ukuzama ukufaka amagama aphambili kumfanekiso ongafanelekanga kunokwenzakalisa ngaphezu kokunceda.
tags: ithegi yeankileumbhalo wethegi ye-anchoriteksi yombhaloigama lethambekaIthegi ye-h1Ithegi ye-h2Ithegi ye-h3zihlokoumfanekisoigama lomfanekisoamabinzana aphambiliUkusetyenziswa kwegama elingundoqoamagamaisihloko sephephaThumela ii-slugsisihloko seposiizihlokwanaisihloko sephepha
Ukuqonda i-R kwiCRM
Ngaphandle kwento yokuba ukuba ujolise kumagama aphambili angalunganga ukuqala ngawo, ayinamsebenzi, ndicinga ukuba uninzi lwawo.
UNabhedi! Amagama aphambili endiwakhethileyo ayengqongqo ngokubonakalayo, i-SEO!
Ukwazi i-SEO kunye nokuyichaza ngokwemigaqo yezilwanyana zezilwanyana ezimbini ezahlukeneyo. Zama kangangoko ndinako, ndifumana imbonakalo eyothusayo xa ndizama ngako konke okusemandleni am ukucacisa ukuba zeziphi iinjini zokukhangela ezijongiweyo, ukuba ukudibanisa kubaluleke kangakanani, kwaye kutheni izihloko zamaphepha zibalulekile. Kungumsebenzi wam ukubonisa ezo zimvo ngendlela emfutshane, ekulula ukuyiqonda. Esi sithuba sandinceda kakhulu. Umsebenzi omhle kakhulu.
Enkosi, Dan! Kube ngamandla kum kwaye ndiyaqhubeka nokuzama ukuyilungisa. Ndicinga ukuba ndingcono emntwini, ikakhulu kuba ndiyakwazi ukuguqula inkangeleko yokudideka yabantu endithetha nabo.